Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: samy zanak’Iarivo | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: samy zanak’Iarivo
Raha anio alina no ho tapitra ny fotoana ahafahana mametraka ny filatsahana amin’ny fifidianana ben’ny tanàna, dia hisokatra ho fantatry ny rehetra ny anaran’ireo mpilatsaka. Tsy ilaozan’izay olona tsy fantatra loatra, na tsy dia vahiny amin’ny sofina aza ny anarany, ny maro angamba dia fantapantatra ihany ny momba azy, mety hisy koa anefa izay efa diso fantatra na noho ny tsara nataony na noho ny ratsy nefainy. Raha samy rakotra ao amin’izay fitenenana hoe « diso fantatra » izay aza ny tsara sy ny ratsy, matetika laza ratsy ny hevitra voalaza. Raha fifidianana no sehatra anaovana fifaninana, dia mety ho tombon-dàlana na ny laza ratsy aza. Misy mpikaroka momba ny fifaninanana eo amin’ny sehatry ny varotra milaza mihitsy fa tombony hatrany ny firesahan’ny olona momba ny olona na zavatra iray, na fandokafana izany na fanaratsiana. Tsy hilaozan’izay ho sodoka rehefa miverimberina ny resaka, hono. Mifanipaka amin’izay, tsy misy taitra ary tsy misy mpijery ka tsy misy ahatsiaro an’izay tsy resahina akory.
Antoky ny ho avy anefa ity fifidianana ity ka andraikitra mavesatra mitambesatra amin’ny mpifidy tsirairay. Ny fizotran’Antananarivo na inona lafiny ho dinihana na inona lafiny itarafana azy, dia izao iarahan’ny rehetra miaiky izao fa mahonena, mba tsy hitenena hoe mandatsa-dranomaso. Noho izay adidy antoky ny ho avy izay, dia voatery samy handanjalanja ny safidiny ny tsirairay, ka samy handalina ny fandinihana fa tsy hiankina fotsiny amin’ny laza. Ny zava-drehetra manana lafy tsara sy lafy ratsy izay, no amadibadihana azy mba tsy ho voasodoka ambony ihany. Araka ny fomba fahaiza-miaina napetraky ny razana, mba tsy andratrana ny sasany dia tahitahiana hatramin’ny fomba fiteny tsy hivantabantana fahatany ka lasa ankolaka hatramin’ny filazana zava-tsy mety. Ny famadibadihana ny lafy tsara sy ratsy anefa, tsy milaza fikarohana sy famoronana hevitra mifamototra. Na izany aza, tsogontsogoina ihany ny maty sao sanatria mandevim-elona.
Izao efa iaraha-mahita izao moa ny fikoroson’Antananarivo. Mivaralila toa very fototra ifikirana. Mila toko nefa tsy mahita vato, ka mety ho azon’ny fakam-panahy hiankina amin’ny hazo boboka na hiantsampy an-tratrana hazo feno tsilo. Tsy maintsy mitandrina ihany koa sao jambena ka voafitaky ny fisehon’ny «tsilo malemy», rakotry ny tay (zava-pady ka ialan-tsiny) no sady sempotry ny maimbo vao tonga saina. Tsy kilalao ity raharaha ity tsy azo ifanomezam-potoana hiemotra tsy misy farany «kilalao mbola ho ela…». Fohy ny fotoana ahafahana midinika, noho izany tsy maintsy iverimberenana ny fiarahana eo amin’ny fifanakalozan-kevitra.